Budata Farming Simulator 22 maka Windows
Budata Farming Simulator 22,
Simulator Farming, egwuregwu kachasị mma na egwuregwu njikwa, na -apụta dị ka Farming Simulator 22 nwere eserese ọhụrụ, egwuregwu, ọdịnaya na ụdị egwuregwu. Ugbo Simulator 22, egwuregwu ugbo #1 nke GIANTS Software mepụtara, na -enye ọrụ ugbo dị iche iche na -elekwasị anya na ọrụ ugbo, anụ ụlọ na oke ohia, ugbu a nwere mgbakwunye na -atọ ụtọ nke usoro oge. Bụrụ otu nime ndị ọrụ ugbo taa wee jiri ihe okike mepụta ugbo gị na gburugburu atọ dị iche iche na America na Europe.
Budata ihe ngosi ugbo 22
Were ọrụ onye ọrụ ugbo nke oge a na gburugburu America na Europe atọ dị iche iche. Were ọrụ ugbo dị iche iche na -elekwasị anya na ọrụ ugbo, anụ ụlọ na oke ohia, ugbu a nwere usoro okirikiri na -atọ ụtọ! Gụnyere igwe na akụrụngwa 400+ sitere na ezigbo igwe ugbo 100+ dị ka John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra. Ngwa igwe ọhụrụ, ihe ọkụkụ na ihe eji arụ ọrụ na -agbakwụnye na ahụmịhe egwuregwu. Jikwaa ndị enyi gị jikwaa ugbo gị na ọnọdụ ọtụtụ mmadụ wee jiri ọtụtụ mgbanwe nefu nke obodo mepụtara ubi gị.
Ugbo Simulator 22 na -enye ndị egwuregwu nnwere onwe karịa ka ọ dị na mbụ. Bido ọrụ ugbo ugbu a ma nwee ọ enjoyụ.
Ihe nlele ugbo 22 chọrọ
Enyere ngwaike nke kọmpụta gị ga -enwerịrị iji gwuo Farming Simulator 22 nokpuru ihe chọrọ sistemụ PC Farming Simulator 22. (Ndị a bụ obere sistemụ chọrọ nke GIANTS Software, onye rụrụ egwuregwu a na -ekerịta.)
Nhazi: Intel Core i5-3330 ma ọ bụ AMD FX-8320 ma ọ bụ ka mma
Kaadị vidiyo: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 ma ọ bụ ka mma (opekata mpe 2GB VRAM, nkwado DirectX 11/12)
Ohere: 35 GB nke ohere dị
Farming Simulator 22 Ụdịdị
Mmepụta: ‪‪GIANTS Software‬
Kacha ọhụrụ na: 06-08-2021
Internet Cafe Simulator bụ egwuregwu ịme anwansị ịntanetị ọhụrụ. Ị nwere ike ịtọ ma jikwaa ebe ọrụ...
Euro Truck Simulator 2 - Oké Osimiri Oké Osimiri, ETS 2 Official DLC ya na maapụ Turkey. Ọ bụrụ na...
Bus Simulator 21 bụ egwuregwu ịnya ụgbọ ala nwere ike ịre na Windows PC na consoles. Jikere ị nweta...
Onye njikwa ugbo 2021: Okwu mmalite bụ egwuregwu njikwa ugbo ị nwere ike ibudata ma kpọọ na kọmputa...
Microsoft Flight Simulator bụ egwuregwu simulator ụgbọ elu kacha mma ị nwere ike igwu na PC....
Simulator Prison: Okwu mmalite bụ egwuregwu ịme anwansị ebe ị na -arụ ọrụ dị ka onye nche ụlọ...
Onye na -anya gwongworo bụ ihe ngosi ụgbọ ala Turkey nwere eserese dị elu nke ị nwere ike igwu na...
Ugbo Simulator 14 bụ ihe kachasị ewu ewu na egwuregwu ịme anwansị ugbo dị na ntanetị Windows yana...
FarmVille 2 bụ egwuregwu ịme anwansị nke ị ga-egwu nefu na mbadamba Windows 8 na kọmputa gị....
Ọ bụrụ nrọ gị bụ ịbụ onye na -agụ mbara igwe, ọ bụ egwuregwu ịme anwansị ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu...
Onye na -ewu egwuregwu Google dị netiti egwuregwu Steam nke ga -adọta uche nke ndị na -achọ ịme...
Ọrụ Ugbo Simulator 2013 bụ egwuregwu ugbo ị ga -ebudata wee jiri obi ụtọ gwuo egwu. Farming...
Ị nwere ike mụta otu esi ebudata ngosi egwuregwu ahụ nisiokwu a: Etu esi ebudata Demo Truck...
Euro Truck Simulator 2 Speed ​​Patch bụ patch bara uru nke ukwuu na -akwadoro idozi nsogbu ịgba...
World of Warplanes bụ egwuregwu efu nke egwuregwu ụgbọ elu nịntanetị. Wargaming.Net, nke anyị...